Shiinaha warshad bar steel steel guga daawaha iyo alaab | Yunlingyu
Awood / Rack Rack
Mashiinka Power Smith
Qalabka Tababarka Xoog
Qalabka Jirdhiska Guriga
barxad barxad wareegsan
Daawaha birta guga ee 2.2M
1.5M qalooca Olimpic bar
miisaanka dumbbell hagaajin karo ...
dubista bir dumbbell dhigay
Dhererka: 220 cm
Dhererka dhiibida: 41cm
Dhexdhexaadinta haynta: 2.8cm
Dhererka xajinta: 90 cm
Magaca badeecada 2.2M daawaha bir steel guga
wax birta guga alloy
miisaanka miisaanka saafiga: 20.4kg
miisaanka guud: 20.9kg
midab dahab ah
Xirxirida weelka fiber
kale sita: 1800lb
Cabbirka baakadka 230 * 10 * 10cm
Daawaha biraha guga ee loo yaqaan 'Alloy steel 4' oo ah shay bir ah, wuxuu leeyahay wax soo saar xoog leh iyo dabacsanaan. Xamuul aad u culus, oo aan u badneyn inuu keeno cillad. Wuxuu leeyahay iska caabin daal badan, wuxuu yeelan doonaa nolol adeeg dheer.
Barbells waxay leeyihiin adeegsiyo badan, Haddii garbahaaga, dhabarkaaga, gacmahaaga, laabtaadu, dhammaantood waxay heli karaan jimicsi. Waxay sidoo kale dib u dhigi kartaa gabowga murqaha, kordhinta cufnaanta lafaha waxayna ka hortagi kartaa lafo-beelka, Hagaajinta dheecaanka endocrine, Hagaajinta isuduwidda jirka. Waa mid ka mid ah laylisyada loogu talagalay ragga iyo dumarka ee raba inay jirkooda ku habboonaan.
Dammaanadda ka dhanka ah foorarsiga ma dabooleyso baarka waxyeellada u geystay dayacaad ama adeegsi khaldan, beddelaad, dayactir, keyd ama isticmaal isticmaale. Isticmaal dayacan ama khaldan waxaa ka mid ah baarka oo si xun loo ridayo (tusaale ahaan, ku tuurista baarka sanduuqa, kursiga keydka, gacmaha wax lagu rito ama biinanka ku jira qafiska korontada) . Arrima kasta oo gaar ah oo laxiriira shey been abuur ah oo macaamilku uusan ku qanacsaneyn ayaa dib loo eegi doonaa iyadoo loo eegayo kiis-kiis. Waxaan ogaanay in dhibaatooyinka ugu badan ee baararka aan badalno ay laxiriiraan adeegsiga xadgudubka halkii lagaheli lahaa arimaha soosaarida ama qalabka.
Naqshadeynta dheeman dheeman dhexdhexaad ah oo dherer ah iyo gacmo gashi, CAP 7 ′ Olimbikada Miisaanka Olombikada ayaa ku qulqulaya taabashada ugu jilicsan si looga hortago in baarku uu qalloocdo Dusha sare ee dusha sare ee knurled waxay ka caawisaa inay bixiso khilaaf iyo hubinta in xajintaadu ay aamin tahay. Tani waxay kaa caawineysaa yareynta cadaadiska gacantaada markii aad miisaanka kor u qaadayso. Waxay ka samaysan tahay bir bir-adkeysi u leh waxqabadka waara, iyadoo la hubinayo inay sii socon doonto sannadaha soo socda. Baarka miisaanka qaadista ee Olombikada wuxuu ku habboonaan karaa 2 ″ taarikada daloolka leh wuxuuna leeyahay miisaan culeyskiisu yahay 500 lb, taasoo ka dhigeysa mid ku habboon qof walba oo qaada. Qalabkan tababarka tababarka ayaa wax weyn u ah jimicsiga gurigaaga.
Hore: 1.5M qalooca Olimpic bar
Xiga: barxad barxad wareegsan
daawaha bir steel guga
Hexagon wareega wareega ee adag
CINWAANBariga Waddada Hengda, Daqiliantipin park, Aagga Horumarinta Dhaqaalaha ee Dingzhou